बाबुरामको ‘बोल्ड’ निर्णय : देबेन्द्र पौडेलसहित १५ जना पार्टीबाट निस्काशित, को–को परे ? « Deshko News
बाबुरामको ‘बोल्ड’ निर्णय : देबेन्द्र पौडेलसहित १५ जना पार्टीबाट निस्काशित, को–को परे ?
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले पार्टीका संघीय परिषद सदस्य देवेन्द्र पौडेलसहित १५ जनालाई निस्काशित गरेको छ ।
पार्टी नीति र विचार विपरित कार्य गर्दै आएको भन्दै पार्टी संयोजक बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार बेलुका प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै उनीहरुलाई पार्टीबाट निस्काशित गरेको जनाएका हुन् । कारबाही स्वरुप पार्टीको सबै जिम्मेवारी र साधारण सदस्यसमेत नरहने गरिएकाे जनाइएको छ ।
भट्टराईले पौडेलसहित वामदेव क्षेत्री, कुमार पौडेल, महेन्द्र पासवान, मुक्ति प्रधान, पासाङ शेर्पा, सुशीला शिर्पाली, बलावती शर्मा, तिलक थापा, अमरध्वज लामा, वाहीद अन्सारी, हरि चौलागाईं, शर्मिली तामाङ, रत्न राना र रविन्द्र सुनुवारसहितका नेताहरुलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको वक्तव्य मार्फत जनाएका छन् । पाैडेलसहितका १५ जनाले शुक्रबार नै बृहत ध्रुविकरण समिति गठन गरेका थिए ।